Digniinta Waxqabadka: Gargaarka COVID ee Muhaajiriinta - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Qaad qaado > Digniinta Waxqabadka: Gargaarka COVID ee Muhaajiriinta
In kasta oo bilooyin dadaallo la isku dubariday lagu dalbanayay in qoysaska soogalootiga ah lagu daro qayb ka mid ah xirmooyinka gargaarka ee dowladda dhexe ee COVID-19, Hogaamiyaha Aqlabiyadda Senate-ka Mitch McConnell iyo Senator Cory Gardner ma aysan soo saarin wax sharci ah oo muhiim ah oo ay ku jiraan soogalootiga xirmada gargaarka ee xigta ee COVID.
Dayacaadani waxay saamayneysaa malaayiin qoys oo ku baahsan dalkeena iyo gobolkeena, sida qoyska Reydesel. Rey sheekadiisa ayuu sheegayaa in la ixtiraamo shaqaalaha guryaha ee aan sharciga lahayn, iyo haweenka nadaafadda meheradaha, isbitaalada iyo dhismayaasha dawladda si ay nooga difaacaan COVID-19.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago sheeko lagu sharfayo dhammaan haweenka nadaafadda meheradaha, isbitaalada, guryaha, iyo dhismayaasha dowladda inta lagu jiro aafada. Sheekadaydu waxay ku saabsan tahay gacmaha hooyaday laakiin waxay ku saabsan tahay gacmaha hooyadaa - gacmaha dumarka naga difaacaya COVID-19. ”
Rey iyo sheekadi hooyadiis muuji naxariis darada xirmada gargaarka ee ugu horeysa ee CARES COVID oo kumanaan kun ka saareysa baaritaanka kicinta federaalka. Dalkeenu ma sii wadi karo inuu u arko muhaajiriinta inay yihiin 'lagama maarmaan' una diidi karaan inay helaan faa'iidooyinka aasaasiga ah iyo gargaarka inta lagu jiro masiibo caalami ah.
Waxaan rabaa in hooyaday gacmaheeda ay qabtaan diplomaasiyadayada, shahaadooyinka, abaalmarinta guusha, iyo mustaqbalka ayeeyadeed. Gacmahaas ayaa iga dhigay waxa aan maanta ahay. Waxayna u adkaysteen wax badan 44-kii sano ee ugu dambeeyay halganka - ahaanshaha hooyo da 'yar, korinta afar caruur ah, iyo xitaa inay ka gudbaan lamadegaanka si caruurteedu aysan uga shaqeyn doonin beeraha cudbiga ee Mexico sida ay u samaysay ilmo yar. ”
Hooyo Rey iyo hooyooyinka kale ee soogalootiga ah, walaalaha, walaalaha, iyo xubnaha bulshada ayaa ka adeegaya jiidaha hore waxayna u qalmaan sharaf iyo ixtiraam noloshooda. Fadlan nagu soo biir adiga iyo Rey adoo adeegsanaya codkaaga iyo gacmahaaga si aad uhadasho iyo wac senator Cory Gardner si loogu daro soogalootiga xirmada kicinta ee soo socota ee COVID-19.
“Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan gacmahayga u adeegsan lahaa midaynta Mareykanka. Waxaan rabaa in gacmaheyga ay ilaaliyaan caafimaadka hooyadey, iyo caafimaadka dumar fara badan oo dalka u nadiifiya COVID-19. ”
Waxaan si gaar ah u doonayaa inaan gacmaheyga u taago kumanaan haween ah oo aan sharciyeysneyn oo shaqeynaya, sida hooyaday oo kale, oo si uun labadaba shaqo muhiim ugu ah wadankeena una yeeray sharci daro iyo magacyo kale Si wada jir ah ayaan uga soo kaban doonnaa COVID-19 - qayb ahaan sababtoo ah gacmaha adag ee haweenka iyo ragga nadaafadda iyo nadiifinta iyo nadiifinta. MAHADSANID!"
Waa inaan sii wadnaa dagaalka iyo kor u qaad codkeena iyo gacmaheena walaalaheena soo galootiga ah ee soogalootiga ah. Mustaqbalkeena iyo awoodeena inaan ku kobci karno wixii ka dambeeya COVID-19 waxay kuxirantahay gebi ahaanba awoodeena inaan kufiirino kuwa aadka nooga nugul. Qofna yaan laga harin.
Sheekada Reydesel Salvidrez-Rodriguez waa qeyb kamid ah Tiyaatarka Motus Taxanaha UNDOCUAMERICA, taas oo loo abuuray in lagu carqaladeeyo sawirada bini'aadamnimada ee soogalootiga iyada oo lagu dhiirrigelinayo ka-qaybgal feker leh oo ku wajahan caqabadaha haysta bulshada aan sharciga lahayn iyo siyaabaha ay hantida ugu yihiin dalkeenna
#Istaandhigga Muhaajiriinta #Anagaa Muhiim Ah
Fadlan nagu soo biir weydiisashada Waaxda Caymiska ee Colorado (DOI) inay ka saarto lambarrada dammaanadda bulshada codsiyada caymiska caafimaadka! Sharcigan la soo jeediyay ayaa sidoo kale taageeri doona hirgelinta Sanduuqa Lacageed ee Caymiska Caafimaadka, taas oo wuxuu balaadhinayaa kaalmada caymiska caafimaadka ee soo galootiga isagoon haysan dukumiinti. Waxaa jira mucaarad badan, marka DOI waxay ubaahantahay inay kaa maqasho adiga oo taageeraya isbedelka!
In laga codsado SSNs codsiyada caymiska caafimaadka ayaa caqabad ku ah caqabad aan loo baahnayn oo soogalootiga u qalma helitaanka daryeel caafimaad oo loo siman yahay. Waad awoodaa halkaan wax ka qabad ama soo gudbi ra'yigaaga adoo adeegsanaya kuwan tilmaamo waxtar leh oo qoris ah ka socda wada-hawlgalayaashayada Xarunta Horumarinta Caafimaadka. Dukumiintigaan sidoo kale wuxuu leeyahay warqad qoraal ah haddii ururkaagu jeclaan lahaa inuu soo gudbiyo warqad, ama haddii shaqsi ahaan aad jeceshahay inaad ka dhiibato faallo taageero ah. Waxaad warqaddaada ugu soo diri kartaa emayl halkan DORA_INS_rulesandrecords@state.co.us.
Waa ka sii muhimsan tahay hadda sidii hore si loo hubiyo in qof kastaa uu helo daryeel caafimaad oo la awoodi karo, gaar ahaan kuwa ugu nugul oo si aan ku habboonayn u saameynaya cudurka caalamiga ah ee COVID-19.
Waxaad haysataa ilaa Khamiistaan, Ogast 6-da ilaa soo gudbi faallo or warqad ilaa DORA_INS_rulesandrecords@state.co.us.
Wadajirka & Halganka,